भोलिदेखि सबै स्कुल एक महिनासम्म बन्द हुने ! – Charchit Entertainment
भोलिदेखि सबै स्कुल एक महिनासम्म बन्द हुने !
एजेन्सी । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) सँगै यसको नयाँ संस्करणको भाइरस अनियन्त्रित रूपमा फैलन थालेपछि बेलायतमा सात साताका लागि सोमबार लकडाउन घोषणा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सन् २०२१ को मार्चसम्म देशभर कडा लकडाउन रहन सक्ने घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री जोनसनले सबै जनताले लकडाउन अवधिमा कडा रूपमा नियम पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कोरोना भाइरसका कारण बेलायतमा एक लाख व्यक्तिको निधन हुन नदिन पनि लकडाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री जोनसनको भनाइ छ । अहिलेसम्म बेलायतमा कोरोना भाइरसबाट २७ लाख १३ हजार संक्रमित भएका छन् । साथै ७५ हजार तीन सय ४१ जनाको निधन भइसकेको छ ।
बेलायतमा मध्यफेब्रुअरीसम्म सबै स्कुल बन्द हुनेछन् । तर, प्रधानमन्त्री जोनसनले ग्रामीण भेगका स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउन सकिने अनुमति दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको संख्या आधा मात्र हुनुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य र फिटनेस कायम राख्न सातामा एक दिन मात्र बाहिर आउन पाउने अनुमति छ । बिहान र साँझ मात्र एक्सरसाइज गर्न मिल्नेछ । लकडाउन घोषण भएकै दिन ४ जनवरीदेखि रात्रिकालीन पसलहरू बन्द भइसकेका छन् ।
बेलायतमा सोमबार मात्र ५८ हजार सात सय ८४ जना संक्रमित थपिएका थिए । पछिल्लो २८ दिनमा चार सय सातजनाको निधन भएको छ । ‘हामीलाई कोरोना नियन्त्रण गर्न निकै दबाब बढेको छ,’ प्रधानमन्त्री जोनसनले भने, ‘पहिलोभन्दा अहिले संक्रमित बढिरहेका छन्, यसैकारण सरकारमाथि दबाब बढेको हो ।’ यसैगरी ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई घरबाहिर ननिस्कन भनिएको छ । फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सबैलाई आपतकालीन अवस्थामा रहन प्रधानमन्त्री जोनसनले निर्देशन दिएका छन् । फेब्रुअरीको मध्यसम्म सबैले भ्याक्सिन पाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
हिउँमा परेर १३ जनाको ज्यान गयो (अपडेटसहित)
साह्रै दु’खद घटना : उडेको केही मिनेटमै जहाज दु’र्घ’टना, सवार ६२ जनाको मृ’त्यु !